1 Olee Otú M Pụrụ Naghachi ehichapụ iMovie Files?
Hi, m na mberede ehichapụ ụfọdụ iMovie mkpachị, na Echere m na m Ewepụtawo m ahịhịa kwa. M gbalịrị "Wepu Dezie", ma ọ tụgharịrị na-abaghị uru. Ndị mkpachị bụ n'ezie dị nnọọ mkpa maka m. Dị ụzọ ọ bụla ka m ha azụ? Daalụ nke ukwuu.
iMovie bụ ike kacha ike video-edezi ngwa na Mac. Ị pụrụ ime ka ihe ọ bụla videos ị chọrọ ya. Otú ọ dị, gị iMovie faịlụ ka nwere ike ga-efu ruru gị nhichapụ, virus agha ma ọ bụ ọbụna usoro njehie. Ọ bụrụ na ị nwere nkwado ndabere nke ha na gị na Mac ma ọ bụ ọ bụrụ na ị sụrụ gị Mac ahịhịa, ị nwere ike mfe weghachite ha enweghị enyemaka ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga-chọrọ onye iMovie mgbake ngwa iji naputa gị furu efu iMovie faịlụ ahụ.
Wondershare Data Recovery for Mac Bụ ihe ngwọta kasị mma n'ihi na ị na weghachi iMovie mfe na n'enweghị. Ọ na-enyere gị aka naghachi ehichapụ iMovie faịlụ ma ọ bụ naghachi iMovie ọbá akwụkwọ naanị 3 nzọụkwụ. N'agbanyeghị gị iMovie faịlụ furu n'ihi na gị nhichapụ, formatting ma ọ bụ usoro njehie, ngwá ọrụ a nwere ike mgbe niile enyere gị aka.
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery for Mac iji weghachi iMovie faịlụ ugbu a!
2 3 Nzọụkwụ ịrụ iMovie Iweghachite
Tupu anyị amalite mgbake, biko adịghị wụnye ngwa na nkebi ma ọ bụ olu na gị iMovie faịlụ furu si.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode naghachi iMovie n'ọbá akwụkwọ
Mgbe na-agba ọsọ Wondershare Data Recovery for Mac, ị ga-ahụ a mmalite interface egosiputa ọtụtụ mgbake ụdịdị.
Naghachi ehichapụ iMovie faịlụ, i nwere ike iri "Echefuola File Iweghachite" dị ka a mbụ na-agbalị. Nke a mode bụ ike naghachi niile faịlụ na ụdị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi nkebi ma ọ bụ olu na gị iMovie faịlụ furu si
Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-egosi niile partitions ma ọ bụ mpịakọta na gị Mac. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ otu na gị iMovie faịlụ furu si na pịa "iṅomi" button ịchọ ya.
Ọ bụrụ na gị iMovie faịlụ furu n'ihi mbanye formatting, biko họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi iMovie faịlụ
Mgbe scanning, niile hụrụ ọdịnaya na gị Mac nkebi ga-edepụtara na mmemme window. Ị nwere ike na-ele gị iMovie n'ọbá akwụkwọ nchekwa ego olee otú ọtụtụ n'ime gị furu efu iMovie faịlụ nwere ike gbakee.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa ka akara iMovie faịlụ na ị chọrọ iji weghachite na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha azụ gị Mac.
Cheta na: Biko adịghị na-natara faịlụ azụ mbụ nkebi zere data overwritten.
Olee otú Mee a Time-Lapse Movie na iMovie
iMovie: iMovie Nchọpụta nsogbu Atụmatụ
Olee otú Mee a Sports mata iMovie
> Resource> iMovie> iMovie Iweghachite: Olee naghachi ehichapụ iMovie Files